Ao Jamaika: Afaka Manao Izay Hanaitaitra Ve No Sady Hitàna Biraom-panjakàna Ny Vehivavy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2015 10:53 GMT
Zara raha nanànan'i Lisa Hanna, minisitry ny tanora sy ny kolontsaina ao Jamaika, ny fotoana hiarenana avy amin'ny valinteny mafàna tao amin'ny instagram nifanakalozany tamin'i Chronnix, mpanakanto mpiangaly Reggae, rehefa nandray ny fitaovam-pidiany indray ireo mpampiasa media sôsialy — fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nikasika saripika iray nalefany ahitàna azy mihanjahanja mitafy bikini teny amorontsiraka.
Tsapan'ny maro ho tsy nety loatra ho an'i Hanna, izay nahazo ny anaram-boninahitra Oliravin'izao Tontolo izao tamin'ny taona 1993, ny mandefa sary tahaka izany, indrindra fa noho ny toerana ambony ara-pôtika tazoniny amin'izao fotoana izao. Iray mpampiasa Facebook, i Neo Makeba, no nihevitra fa nanome ohatra ratsy ho an'ny ankizy i Hanna :
Heveriko fa mba tokony hisy fepetra fifehezantena avy aminy, satria izy tomponandrakitra amin'ny fitarihana ny pôlitika momba ny tanora sy ny ANKIZY. Ankehitriny, heveriko fa tokony hanaisotra ilay sary izy noho izay antony izay. Firenena iresahana be loatra ny resaka firaisana ara-nofo i Jamaika, miaraka amin'ny karazana fizahantany mampitsangam-bolo amin'ny tranga sasany, ny tononkira manorisory manetry ny vehivavy sy ny tovovavy ary ireo baranahiny rehetra izay vetivety foana dia nandrakotra ny firenentsika. Tokony hiseho manetry tena i Lisa Hanna, ho vehivavy mendrika, miaraka aminà sarin'olona iray MATOTRA […] Amin'ny endrika hafa dia toa tsy tsapany mihitsy fa misy tanora mora mandray zavatra, ary ny fampisehoany ny “aminy” tahaka izao dia tena DISO TOERANA tanteraka!!
Garnett Greene nahatsapa hoe tokony ho nalefadefaka izy :
Ankehitriny aho hilaza fa metimety kokoa raha mba fitafy fitondra milomano mba maoty kokoa no nanaovana, eo ny maha-minisitra ao anaty governemanta azy, indrindra fa ministera iray miaro ny tolon'ireo tanora vehivavy iharan'ny ataon'ireo mpankafy vetaveta ara-nofo. Raha toa izy tany amin'ny dobo filomanosany tany an-tranony manokana, dia eny….anaovy izay tianao.
Nitsipaka mafy i Michelle Graham Day, tamin'ny nanamarihany fa diso fandray ny olona miandry ny hoe tsy tokony hanao izay hanaitaitra ny vehivavy mitàna andraikitra.
Tsy afaka ny hijery mahitsy ianao…minisitry ny tanora sy ny KOLONTSAINA izy ary vehivavy manja ihany koa no sady ambonin'izany rehetra izany dia Oliravin'ny TONTOLO tao Jamaika fahiny, tsy nisy hadisoany mihitsy, tsy izy no niteny tamin'Andriamanitra hanao azy ho manja! Inona indray no mifamatotra bebe kokoa amin'ny KOLONTSAINA Jamaikàna ankoatra an'i BOB MARLEY, TORAPASIKA, ARY VEHIVAVY TSARA TAREHY?
Vao mainka nanely izay fahatsapana izay ilay Taratasy iray ho an'ny Mpamoaka lahatsoratry ny Jamaica Gleaner. Brian-Paul Welsh, mpanoratra, dia nitanisa ilay “dokambarotra nalaza nataon'ny Biraon'ny fizahantany tamin'ny 1970″ izay nahitàna an'ilay lasibika Sintra Arunte-Bronte, niakanjo T-shirt kotsa, nanara-bàtana ary nisy soratra hoe “Jamaica”, tamin'ny nanamarihany fa niteraka “resabe nivaivay teny anivon'ireo miseho ho mpanetry tena sy voaporitra ara-nofo” ny bikini sy T-shirt nampiarahan'i Hanna “. Nihanihany i Welsh, niteny hoe :
Tokony ho azo nahitsy tsara izany raha toa isika nanao lalàna nametraka ny burqas ho tsy maintsy hanaovan'ny vehivavy rehefa eny amin'ny toerana natao ho an'ny daholobe. Mety ho tahàka ny henjana io, saingy angamba io no hany fomba hanakànana ny valahana sy ny fe tsy hameno ny saintsika. Ry vehivavy, omeo kely izy fa tonga dia ny rehetra no halain-dry zareo.
Ny sasany amin'ireo mpikambana amin'ny tontolon'ny Twitter […] maniry an-dramatoa Hanna hangorona ny kitapo Gucci-ny sy hiàla any, miaraka amin'ny kibony fisapisaka, ny endriny mahafatifaty, ireo randrany tsara voatra, ary ny tsikiny mahafanina!
Satria izy nanao fahotàna mahafaty: nihanjahanja ho an'ny ankamaroan'ny vehivavy ary mahasarika loatra ho an'ny ankamaroan'ny lehilahy.
Ho fiarovantenan'ny sasany tamin'ireo mpampiasa Twitter, nisy ny tsy nahita izay tena olana:
Fa iza no tena be tabataba misavoritaka amin'ny saripikan'i Lisa Hanna e? Tsy misy olona fantatro hoe niteniteny foana teo, na hoe tsy nivaky loha ry zareo. Fa momba ny inona ilay tabataba?
Iray hafa no nanontany tena fa sao dia tetika entina hanariana dia tsy hijery ny fitapitaka pôtika hafa ilay sarim-pitafiana fitondra milomano :
Ary ahoana raha mba tetika natao handrebirebena ny vahoaka tsy hibanjina ny #tantaraRatsinNHT no nandefasan'i Lisa Hanna tao amin'ny IG ilay saripika teny amoro-dranomasina
Ndeha hiverina amin'ny Facebook, navadik'i Raggie Wynter ho ambony ambany ilay tohankevitra hoe “tsy mety” :
Tsy nety ny fitafin'i Lisa Hanna! Tsy misy tokony hataony eny amoron-dranomasina miaraka aminà T-Shirt mihitsy… ny vatana tahàka iny tsy tokony horakofana fitafiana betsaka toy ireny
Sady mihanihany ihany, tsapan'i Dionne Jackson Miller, zokiolon'ny asa fanaovana gazety, fa raha toa hotsinkafonina i Hanna, dia tokony ho mikasika ireo olana mba misy lanjany kokoa :
Ity no resaka. Lavitra ahy ny hiasa saina amin'izay fitafy efa hitako fitondrany hatrizay any, ankaotra ny drafitra sy politika avy amin'ny ministeran-dRamatoakely Hanna. Nandritra ity taona ity fotsiny, voaresaka teny anaty vaovao Ramatoakely Hanna sy ny ministerany tamin'izay nolazaina fa andrana natao hanaisorana ny Sekretera Maharitra Sydney Bartley (izay nitondra ny raharaha teny anatrehan'ny fitsaràna); ny fametraham-pialàn'ny Talen'ny Kolontsaina Dahlia Harris, ny fifamaliany tamin'ireo Rastafariana mikasika ny tany ao amin'ny Pinnacle; ny fandaharanasam-panabeazana iray momba ny resaka fananahana nampiharin'ny vondrona Jamaikàna mpiaro ny zon'olombelona hisian'ny Rariny any amin'ny sasany amin'ireo trano fandraisana ankizy; ary ny ampamoaka nataony momba ny fanapahankevitra noraisin'ny iray tamin'ireo trano fandraisana ankizy tsy hanohy ny fandaharan-pampianarany, ankaotra ireo olana hafa.
Navoitrany tao anatin'ny fanolorany ny tetibolany ny sasany amin'ireo olana ara-bola sedrainy izay mendrika asiana topimaso bebe kokoa noho izay nomentsika azy ireo : ankizy nanjavona, fampianarana asa ho an'ny tanora, fametrahana ny Blue/John Crow Mountains ho ao anatin'ny lisitr'ireo vakoka manerantany, ary ny tolokevitra iray ho fametrahana foiben-toerana hitsaboana ireo ankizy niharan'ny fanararaotana.
Amin'ny ampahany ny fifanakalozan-kevitra momba an'i Hanna dia taratry ny toe-tsain'ny fiarahamonina Karaibeana mpifikitra amin'ny nentin-drazana, indrindra raha vao resaka fananahana. Vao mainka manampy mamelona ny afo angamba ny hoe zara raha misy vehivavy vitsivitsy mitazona toerana ambony amin'ny asam-panjakàna any amin'ny faritra, na ohatra aza ka vehivavy no praiminisitra ankehitrny ao Jamaika sy Trinidad sy Tobago. Araka izay anehoan'ny sasany amin'ireo fanehoankevitra ety anaty tambajotra sôsialy azy anefa, mety hiova ny toe-tsaina sy fijery.
Ny media sôsialy rahateo, amin'ny maha-mpivoy fahalalàna sy vaovao azy, tsy maintsy mitoetra ho tsy tapaka amin'ny fanarahana izany, toy ny mpandray anjara ao anatin'ilay resabe. Angamba ampahany ao anatin'ilay olana ny fomba fisainana nentin'i Hanna nanapa-kevitra handefa ilay saripika ho eny anoloan'ny sehatra, izay miteny ny hevitr'ireo Jamaikàna mpisera ety anaty aterineto momba ny tena fitsipi-pitondrantena madion'ny media sôsialy sy ny fomba fahitàn'ny olona ny anjara andraikitra pôlitikan'i Hanna, fa tsy dia ilay zava-misy loatra hoe mahafatifaty ilay minisitra iray ao amin'ny governemanta rehefa manao bikini.
Tantaran'ny Jamaika farany
05 Jolay 2021Karaiba